Kheyre ma maareyn karaa masaalixda saddex geesoodka ah? - BBC News Somali
Kheyre ma maareyn karaa masaalixda saddex geesoodka ah?
Ra'iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Isniintii xafiiskiisa ku qaabilay Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, Ine Marie Eriksen Soreide.
Booqashada Ine Eriksen Soreide ayaa imaanaysa ayadoo la sheegayo in xiriir sii xoogaysanaya uu u dhexeeyo dalalka Soomaaliya iyo Norway.
Norway ayaa ammaantay xukuumadda Soomaaliya oo ay sheegtay in ay ka soo kabanayso dhibaatooyiinka, isla makaasna xasilloonida ka jirta Soomaaliya awgeed laga fulin karo barnaamijyo horumarineed.
Haddaba, waxaa jira dano iska hor imaankara oo Ra'iisulwasaare Kheyre uu wajahayo:
Norway iyo Kheyre
Mudane Xasan Cali Kheyre waa muwaadin haysta baasaboorka Norway. Ine Erikson mar waxay u noqoneysaa madax, marna waa laba masuul oo kala matala dano labo dal.
Dr Abuukar Yuusuf Warsame oo wax ka dhiga Jaamacad ku taalla dalka Sweden ayaa sheegay in "maadaama Soomaali badan ay dibadaha u qexeen ayna ku tiirsan yihiin dal ay baasaboorkiisa haystaan, haddana in uu shaki jiri karo".
"Waxaa jiri kara, tuhun ahaan, in qofkaas dhalasho kale haysta uu daacad u noqon karo hal dhinac ama siduu labada dal danohooda u dheeli tiri lahaa ay caqabad ka qabsato", ayuu yiri.
"Ma u maleynayo baasaboorka uu haysto Kheyre iyo xiriirka labada dal, in la isku xiri karo. Inkastoo la dhihi karo qofka laba dal buu u dhaartay, tuhunkaasna wuu jiraa," ayuu hadalka ku daray Dr Abuukar Yuusuf Warsame.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa horey ugu shaqeeyay hay'adda NRC oo qaxootiga u qaabilsan dalka Norway.
Dr Abuukar ayaa sheegay: "Ra'iisul wasaaraha oo keli ah dalka kama taliyo; madaxweynaa ka taliya, Gudoomiye baarlamaan baa ka taliya; gole wasiirro baa ka taliya; shacabkii baa feejigan".
Balse arrintu waxay tahay in inta badan masuuliyiinta ay ka yimaadeen qurbaha ayna haystaan baasaboorrada dalal kale.
Soomaaliya iyo Kheyre
Xasan Cali Kheyre ayaa xilka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya loo magacaabay bilowgii sannadkii 2017-kii.
Inkastoo uu haysto baasaboorka Norway, dastuurka Soomaaliya kama hor istaagayo inuu qabto xilka labaad ee dalka ugu sareeya.
Laakiin dadka arrimahan falanqeeya waxay aaminsan yihiin in qofka haysta dhalashooyiin kala duwan, ay ku adkaan karto inuu "daacad u noqdo" labo dastuur, maadaama uu ku dhaartay labadaba.
Dadka wax falanqeeya ayaa qaba in Norway ay dano badan oo dhaqaale kalleedahay Soomaaliya, ayna suuragal tahay in arrimahaas caqabad aysan isku noqon.
"Norway dan bay Soomaaliya ka leedahay, mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale labadaba, Soomaaliduna dan bay leedahay, laakiin danta Norway ay leedahay ayaa ka wayn tan Soomaalida" ayuu yidhi Dr Abuukar Yuusuf Warsame oo wax ka dhiga Jaamacad ku taal dalka Sweden.
Mar uu sharaxayay in Kheyre dartii ay Norway ugu soo dhawaatay Soomaaliya, wuxuu sheegay in Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu haysta baasaboorka dalkaa, xilligiisiina la gudbiyay kiiska maxkamadda ee badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Si la mid ah Ra'iisulwasaare Kheyre, masuuliyiin badan oo xilal sare ka haya Soomaaliya ayaa haysta dhalashada dalal kale sida madaxweyne Farmaajo oo haysta baasaboorka Mareykanka.
"Haddii sharciyo iyo wax dalka (iyo dadka) kala saara la helo, oo xakameyn la sameeyo, arrimaha la saxiixayo iyo waxa la galayo, ma qabo in danta uu hal qof leeyahay ay dalka wax ka badali karto", ayuu yiri.
Som Oil iyo Kheyre
Ra'iisulwasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre wuxuu ka tirsanaa madaxda shirkadda shidaalka ee Som Oil iyo Gas, ka hor intaan loo magacaabin xilka ugu sareeya golaha fulinta ee dalka.
"Tuhun waalaga qabi karaa, maadaama uu Ra'iisulwasaaraha horey ugu jiray ganacsigan shidaalka," ayuu yiri Dr Abuukar oo bare ka ah jaamacad ku taalla Sweden.
Norway ayaa horay heshiisyo dhanka baarista shidaalka ah ula gashay dalka Kenya oo muran dhanka badda ah uu kala dhexeeyo Soomaaliya.
Sida uu qabo Dr Abuukar, Norway ayaa khasaare ku qabta haddii uu sii socdo muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Norway ayaa horay sahan uga samaysay aag badeedka ay ku muransan yihiin labada dal ee maxkamadda ICJ laga sugayo in ay go'aan ka gaarto.
"Haddii Soomaalidu ku guulaysato kiiska badda, Norway waxay doonaysaa in ayadu ay hoggaamiso mashaariicda horumanineed" ayuu yidhi Dr Abuukar oo la hadlay BBC Somali.
Norway ayaa tababarro u samaysa shaqaalaha wasaaradaha batroolka iyo Maaliyadda ee Soomaaliya, waxay sidoo kale halkaas ka fulisaa barnaamijyo dhowr ah oo horumarin ah.
"Dadadaalladaas faraha badan, Norway waxay uga golleedahay in ay noqoto cidda ugu horraysa ee ka faa'idaysata khayraadka Soomaaliya haddii ay Soomaaliya ku guulaysato dacwadda muranka badda".
Muuqaal Ra'iisalwasaaraha Soomaaliya oo wareysi siiyay telefishinka BBC Soomaali